Kitendry Matias Wired, fitendry mitatra ho an'ireo izay tsy mila fahasarotana | Avy amin'ny mac aho
Kitendry Matias Wired, fitendry mitatra ho an'ireo izay tsy mila fahasarotana
louis padilla | | Nohavaozina tamin'ny 17/02/2020 10:58 | Accessories
Raha mitady keyboard USB miasa tanteraka amin'ny Mac anao ianao, aza miditra amin'ny magazay Apple satria efa ela izy no nandao azy noho ny kitendry tsy misy tariby. Ny kitendry Bluetooth dia mahazo aina ary manana toetra tsara maro, fa misy mpampiasa maro izay maniry ny fahamendrehan'ny keyboard mahazatra miaraka amin'ny tariby USB-ny, ary izany no antony nanombohan'i Matias ny "Wired Aluminium Keyboard".
Miaraka amina endrika sy fitaovana izay mampitovy azy amin'ny kitendry efa ela natolotr'i Apple hatry ny ela safidy tsara indrindra ho an'ireo izay te hanadino ny famerenana ny solosaina birao. Efa nanandrana izany izahay ary milaza aminao ny zavatra tsapanay.
1 Natao manokana ho an'ny Mac
2 Tombony amin'ny tariby USB
Natao manokana ho an'ny Mac
Kitendry natao hampiasaina amin'ny Mac izy io, noho izany dia tsy halahelo anao ny lakilen'ny fampiasanay matetika amin'ny rafitra fiasa Apple. Fanaraha-maso ny famirapiratana, fanaraha-maso ny volavola, Fanaraha-maso ny misiona, cmd ... amin'ny kitendry Matias dia tsy mila mamerina mamaha fanalahidy ianao Mba hiasa tsara ny zava-drehetra, dia hesorina ao anaty boaty izany ary ampifandraisina amin'ny solo-sainanao. Ilaina koa ny kitendry isa.
Tsy ny fanalahidy ihany fa ny endriny iray sy ny fitaovany fitendry manontolo dia mitovy amin'ny Apple. Aliminioma anodized sy fikitika tena mitovy amin'ny fitendry tany am-boalohany izay amidin'ny orinasa hatramin'ny vao haingana. Rehefa afaka volana maromaro dia mampiasa ny kitendry backlit izay amidy mitovy marika ihany ary manadihady koa izahay amin'ny Ity lahatsoratra ity Azoko lazaina fa tena ahazoana aina ny manoratra eo aminy.
Tombony amin'ny tariby USB
Na dia mpino mahatoky amin'ny teknolojia tsy misy tariby aza aho dia tsy maintsy ekeko fa mahafinaritra ny manana kitendry miaraka amin'ny tariby USB, ary ity fitendry Matias ity misy antony maro hafa koa. Ankoatra ny tombony miharihary amin'ny tsy miankina amin'ny famerenana ny kitendry, eto isika dia tsy maintsy manampy iray hafa tena lehibe: manana port USB roa ahafahanao mampifandray ireo fitaovana mora foana.
Ny fidirana amin'ny seranana aoriana ao amin'ny iMac anao dia tsy ny asa ahazoana aina indrindra eto amin'izao tontolo izao, ary miaraka amin'ity kitendry ity izay resena noho ny seranan-tsambo USB roa izay hita eo an-jorony. Tsy seranan-tsambo hafainganam-pandeha 3.0 izy ireo, noho izany dia tsy natao ho an'ny famindrana rakitra lehibe izy ireo, fa ho an'ny fifandraisana fahatsiarovan-tena avy hatrany.
Na dia toa tsy azo ihodivirana aza ny firosoana mankany amin'ny peripheraly misy fifandraisana tsy misy tariby, dia mitohy hatrany ny kitendry tariby manana mpihaino izay resy lahatra fa izy ireo no safidy tsara indrindra ampiasaina amin'ny birao, hampifandraisana fahatsiarovana fitahirizana. Ny Matias Wired Keyboard dia mahafeno ireo teboka rehetra ireo ary manana endrika mitovy amin'ny kitendry USB efa nilaozan'ny Apple. Miaraka amin'i vidiny € 69,99 en Masinista io no safidy tsara indrindra ho an'ireo izay maniry fitendry USB ho an'ny Mac.
Kitendry Matias Wired
Famaritana manan-danja espaniola
Kitendry fitendry namboarina tamin'ny macOS
Seranan-tsambo USB roa hampifandraisana fahatsiarovana ivelany
Volavola Premium sy fitaovana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » Accessories » Kitendry Matias Wired, fitendry mitatra ho an'ireo izay tsy mila fahasarotana